မကျဆီရဲ့ ခတျေ ကရြိပျရောကျလာပွီလား…? ပှဲ ၅၀၀ ပွညျ့ကစားခဲ့ပမေယျ့ ကမ်ဘာ့ အကောငျးဆုံး အသငျးမှာ ပါဝငျခှငျ့မရတဲ့ မကျဆီ – Premier League Special
ဘာစီလိုနာအသငျးခေါငျးဆောငျ မကျဆီဟာ ပွီးခဲ့တဲ့တနင်ျဂနှနေကေ့ ဟှယျဆကာအသငျးနဲ့ ပှဲမှာ လာလီဂါပှဲ ၅၀၀ ပွညျ့မွောကျခဲ့ပွီး ပွိုငျပှဲသမိုငျးတဈလြှောကျ ပှဲ ၅၀၀ ပွညျ့တဲ့ စပိနျပွငျပပထမဆုံးကစားသမားအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီပှဲဟာ မကျဆီအတှကျ လာလီဂါပှဲ ၅၀၀ ပွညျ့ဖွဈသလို ဘာစီလိုနာကစားသမားဘဝ ပွိုငျပှဲစုံပှဲ ၇၅၀ ပွညျ့တဲ့ ပှဲလညျးဖွဈပါတယျ။
မကျဆီဟာ လာလီဂါပွိုငျပှဲတှငျ ပှဲ ၅၀၀ ပွညျ့ခဲ့တာကွောငျ့ ဘာစီလိုနာအသငျးသမိုငျးတဈလြှောကျ အမှတျပေးပှဲအမြားဆုံး ကစားသမားစာရငျးတှငျ ၅၀၅ ပှဲဖွငျ့ စံခြိနျ တငျထားတဲ့ အသငျးခေါငျးဆောငျဟောငျး ဇာဗီကိုလိုကျမီဖို့ ငါးပှဲသာ လိုပါတော့တယျ။
ပှဲအမြားဆုံး ထိပျဆုံး ကစားသမား ၁၀ယောကျမှာ စပိနျကစားသမားမြားသာဖွဈပွီး မကျဆီကတော့ စပိနျပွငျပပထမဆုံးကစားသမားဖွဈပါတယျ။ ဟှယျဆကာနဲ့ပှဲမှာ မကျဆီဂိုးမသှငျးယူနိုငျ ခဲ့ပမေယျ့ ဒီယှနျးသှငျးယူတဲ့ အနိုငျဂိုးကို တော့ ဖနျတီးပေးခဲ့ပါတယျ။ မကျဆီဟာ ဘာစီလိုနာကစားသမားဘဝတဈလြှောကျ ဂိုးဖနျတီးမှု အကွိမျ ၂၀၀ ပွညျ့ထားပါပွီ။
ဒါပမေယျ့ ရှဘေောလုံးဆုလို့ လူသိမြားတဲ့ Ballon D’or Award ကို ပေးအပျခြီးမွှငျ့တဲ့ နာမညျကွီး ပွငျသဈ သတငျးဌာန တဈခုဖွဈတဲ့ L’Equipe သတငျးဌာနက ရှေးခယျြခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ခုနှဈရဲ့ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး အသငျးမှာတော့ မကျဆီဟာ ရှေးခယျြမခံခဲ့ရပါဘူး။
ပွီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီမှာ ဘာစီလိုနာ အသငျးနဲ့ ဆုဖလား အောငျမွငျမှု မရရှိခဲ့သလို ဘိုငျယနျ ကို ၈-၂ နဲ့ အရှကျ တကှဲ ရှုံးနိမျ့ပွီး ခနျြပီယံ လိဂျ ကနေ ထှကျခဲ့ ရမှုတှေ ဟာ မကျဆီ အတှကျ အမညျးစကျ ထငျစခေဲ့ ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တဈဦးခငျြး စှမျးဆောငျရညျ အနနေဲ့ ပွိုငျပှဲစုံမှာတော့ သူဟာ သှငျးဂိုး ၃၁ဂိုး အထိ သှငျးယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။
L’Equipe လို ဘောလုံးလောကရဲ့ အထငျကရသတငျးဌာနတဈခုရဲ့ ရှေးခယျြမှုမှာ မကျဆီ အရှေးမခံရပမေယျ့ သူ့ရဲ့ပွိုငျဘကျ ရျောနယျဒိုက အဲဒီအကောငျးဆုံး အသငျးမှာ ရှေးခယျြခံခဲ့ရပါတယျ။ လီဝမျဒေါ့စကီး၊ နမော တို့တှပေါ ဒီအသငျးမှာပါဝငျခဲ့ပမေယျ့ သူ့အနနေဲ့ ရှေးခယျြခံရမှုမှာမပါဝငျခဲ့တာက အတျောကိုခံရခကျစမှောပါ။
ဒါကွောငျ့ မကျဆီရဲ့ ပရိသတျတှကေတော့ အဲဒီ ဖွဈရပျအတှကျ မကမြေနပျဖွဈနကွေပါတယျ။ မကျဆီဟာ ယခုရာသီ လာလီဂါ ပွိုငျပှဲတှငျ ခုနဈဂိုးသာ သှငျးယူထားနိုငျပမေယျ့ ၂၀၂၀ ပွက်ခဒိနျနှဈတဈနှဈအတှငျး ၁၉ ဂိုးသှငျးယူထားနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ လာလီဂါပွိုငျပှဲရဲ့ ဂိုးအမြားဆုံးသှငျးယူထားနိုငျတဲ့ ကစားသမားအဖွဈ ရပျတညျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
၄-၄-၂ ကစားကှကျ ကို အခွပွေုပွီး ရှေးခယျြ ခဲ့တဲ့ L’Equipe ရဲ့ ၂၀၂၀ခုနှဈ တဈနှဈတာ အကောငျးဆုံး အသငျးမှာပါဝငျတဲ့ကစားသမားတှကေ-
ဂိုးသမား – နူအာ
နောကျတနျး – အာနိုး ၊ ဗနျဒိုကျ ၊ ရာမိုဈ့ ၊ အယျဖှနျဆို ဒဗေီးဈ
ကှငျးလယျ – ဒီဘရိုငျးနား ၊ သီယာဂို အယျကနျထရာ ၊ ကငျမဈချြ ၊ နမော
တိုကျစဈ – လီဝနျဒေါ့စကီး ၊ ရိုနယျဒို
မက်ဆီရဲ့ ခေတ် ကျရိပ်ရောက်လာပြီလား…? ပွဲ ၅၀၀ ပြည့်ကစားခဲ့ပေမယ့် ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး အသင်းမှာ ပါဝင်ခွင့်မရတဲ့ မက်ဆီ
ဘာစီလိုနာအသင်းခေါင်းဆောင် မက်ဆီဟာ ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့က ဟွယ်ဆကာအသင်းနဲ့ ပွဲမှာ လာလီဂါပွဲ ၅၀၀ ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက် ပွဲ ၅၀၀ ပြည့်တဲ့ စပိန်ပြင်ပပထမဆုံးကစားသမားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီပွဲဟာ မက်ဆီအတွက် လာလီဂါပွဲ ၅၀၀ ပြည့်ဖြစ်သလို ဘာစီလိုနာကစားသမားဘဝ ပြိုင်ပွဲစုံပွဲ ၇၅၀ ပြည့်တဲ့ ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မက်ဆီဟာ လာလီဂါပြိုင်ပွဲတွင် ပွဲ ၅၀၀ ပြည့်ခဲ့တာကြောင့် ဘာစီလိုနာအသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် အမှတ်ပေးပွဲအများဆုံး ကစားသမားစာရင်းတွင် ၅၀၅ ပွဲဖြင့် စံချိန် တင်ထားတဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဇာဗီကိုလိုက်မီဖို့ ငါးပွဲသာ လိုပါတော့တယ်။
ပွဲအများဆုံး ထိပ်ဆုံး ကစားသမား ၁၀ယောက်မှာ စပိန်ကစားသမားများသာဖြစ်ပြီး မက်ဆီကတော့ စပိန်ပြင်ပပထမဆုံးကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။ ဟွယ်ဆကာနဲ့ပွဲမှာ မက်ဆီဂိုးမသွင်းယူနိုင် ခဲ့ပေမယ့် ဒီယွန်းသွင်းယူတဲ့ အနိုင်ဂိုးကို တော့ ဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်။ မက်ဆီဟာ ဘာစီလိုနာကစားသမားဘဝတစ်လျှောက် ဂိုးဖန်တီးမှု အကြိမ် ၂၀၀ ပြည့်ထားပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ရွှေဘောလုံးဆုလို့ လူသိများတဲ့ Ballon D’or Award ကို ပေးအပ်ချီးမြှင့်တဲ့ နာမည်ကြီး ပြင်သစ် သတင်းဌာန တစ်ခုဖြစ်တဲ့ L’Equipe သတင်းဌာနက ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ခုနှစ်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး အသင်းမှာတော့ မက်ဆီဟာ ရွေးချယ်မခံခဲ့ရပါဘူး။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီမှာ ဘာစီလိုနာ အသင်းနဲ့ ဆုဖလား အောင်မြင်မှု မရရှိခဲ့သလို ဘိုင်ယန် ကို ၈-၂ နဲ့ အရှက် တကွဲ ရှုံးနိမ့်ပြီး ချန်ပီယံ လိဂ် ကနေ ထွက်ခဲ့ ရမှုတွေ ဟာ မက်ဆီ အတွက် အမည်းစက် ထင်စေခဲ့ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ဦးချင်း စွမ်းဆောင်ရည် အနေနဲ့ ပြိုင်ပွဲစုံမှာတော့ သူဟာ သွင်းဂိုး ၃၁ဂိုး အထိ သွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ L’Equipe လို ဘောလုံးလောကရဲ့ အထင်ကရသတင်းဌာနတစ်ခုရဲ့ ရွေးချယ်မှုမှာ မက်ဆီ အရွေးမခံရပေမယ့် သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက် ရော်နယ်ဒိုက အဲဒီအကောင်းဆုံး အသင်းမှာ ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ လီဝမ်ဒေါ့စကီး၊ နေမာ တို့တွေပါ ဒီအသင်းမှာပါဝင်ခဲ့ပေမယ့် သူ့အနေနဲ့ ရွေးချယ်ခံရမှုမှာမပါဝင်ခဲ့တာက အတော်ကိုခံရခက်စေမှာပါ။
ဒါကြောင့် မက်ဆီရဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ အဲဒီ ဖြစ်ရပ်အတွက် မကျေမနပ်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ မက်ဆီဟာ ယခုရာသီ လာလီဂါ ပြိုင်ပွဲတွင် ခုနစ်ဂိုးသာ သွင်းယူထားနိုင်ပေမယ့် ၂၀၂၀ ပြက္ခဒိန်နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ၁၉ ဂိုးသွင်းယူထားနိုင်ခဲ့တာကြောင့် လာလီဂါပြိုင်ပွဲရဲ့ ဂိုးအများဆုံးသွင်းယူထားနိုင်တဲ့ ကစားသမားအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၄-၄-၂ ကစားကွက် ကို အခြေပြုပြီး ရွေးချယ် ခဲ့တဲ့ L’Equipe ရဲ့ ၂၀၂၀ခုနှစ် တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံး အသင်းမှာပါဝင်တဲ့ကစားသမားတွေက- ဂိုးသမား – နူအာ၊ နောက်တန်း – အာနိုး ၊ ဗန်ဒိုက် ၊ ရာမိုစ့် ၊ အယ်ဖွန်ဆို ဒေဗီးစ်
ကွင်းလယ် – ဒီဘရိုင်းနား ၊ သီယာဂို အယ်ကန်ထရာ ၊ ကင်မစ်ခ်ျ ၊ နေမာ၊ တိုက်စစ် – လီဝန်ဒေါ့စကီး ၊ ရိုနယ်ဒို